‘बेसार-दुध’ कसरी विश्वभर प्रशिद्ध हुँदैछ ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/‘बेसार-दुध’ कसरी विश्वभर प्रशिद्ध हुँदैछ ?
‘गोल्डेन मिल्क’ दक्षिण एशियाको यो रेसेपी अब पश्चिमको कतिपय देशमा निकै लोकपि्रय हुँदैछ । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, आखिर के हो यो गोल्डेन मिल्क ?
पोषणविद्हरुका अनुसार बेसारको असरबारे सही ढंगले पत्ता लगाउनका लागि अरु पनि अध्ययनको खाँचो छ । कतिपय अध्ययनमा के पाइएको छ भने बेसारमा एन्टि अक्सिडेन्ट गुण पनि भरपुर मात्रामा हुन्छ। यसले बेचैनी वा रक्तचाप बढ्न, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । साथै पाचनसँग सम्बन्धित समस्या ठिक गर्न पनि बेसार उपयोगी हुन्छ ।